Fahasamihafana eo amin'ny vy matevina ambany sy ny firaka avo | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny vy matevina ambany sy ny vy matevina ambony | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Industrial Simia / Difference Low firaka Eo Amin'ny Steel sy firaka High Steel
Fahasamihafana eo amin'ny vy matevina ambany sy ny vy matevina
28 Jona 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy firaka ambany sy ny vy misy firaka ambony dia ny vy kely vita amin'ny firaka ambany dia ambany noho ny singa fangarony 0.2%, fa ny vy firaka avo lenta kosa dia mihoatra ny 5% ny singa mampifangaro .
Ny firaka dia mifangaro singa roa na maromaro. Izy io dia novokarina tamin'ny fampifangaroana vy tamin'ny singa hafa ( metaly na tsy metaly na izy roa) hahazoana fitaovana iray izay nanatsara ny fananany raha ampitahaina amin'ny vy tany am-boalohany. Ny firaka ambany sy ny vy vita amin'ny firaka avo dia karazana firaka vy roa.
2. Inona no atao hoe Steel Alloy Low
3. Inona no atao hoe vy matevina
4. Fampitahana mifanila - Steel kely vita amin'ny alika vs Steel avo mifangaro amin'ny endrika takelaka
Inona no atao hoe Steel Alloy Low?
Ny vy matevina dia karazana vy vita amin'ny firaka izay manatsara ny fananany raha oharina amin'ny vy karbaona . Ohatra, ity firaka ity dia manana toetra mekanika tsara kokoa ary fanoherana fanoherana lehibe kokoa noho ny vy vy. Ny atin'ny karbaona amin'ny vy alika ambany dia ambany noho ny 0,2%. Ny singa alikaoma hafa ankoatry ny karbaona dia misy ny Ni, Cr, Mo, V, B, W ary Cu.
Sary 01: vy
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fizotry ny fanamboarana an'ireny vy ireny dia misy ny fitsaboana hafanana sy ny fifehezana (ho fanamorana ). Saingy ankehitriny, dia mirona amin'ny famonoana sy famonoana. Ary koa, saika ny fitaovana vy rehetra vita amin'ny firaka ambany dia azo averina. Na izany aza, ny fitaovana indraindray dia mitaky fitsaboana mialoha na aorian'ny fantsom-bozaka (hialana amin'ny vaky).
Ny tombony sasany amin'ny vy alimina ambany dia misy ireto manaraka ireto:
Ductility amin'ny maripana ambany, sns.
Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia tena ilaina amin'ny indostria, fa amin'ny mari-pana ambany noho ny 580 ° C. Raha avo kokoa noho izany ny mari-pana, dia tsy mety intsony ity fitaovana ity noho ny tsy fisian'ny fanoherana oksidasiana ampy hiatrehana ny mari-pana ambony.
Inona no atao hoe vy matevina?
Ny vy matevina dia karazana vy vita amin'ny firaka izay misy mihoatra ny 5% -n'ny vy mifangaro. Tsy toy ny vy ambany firaka, ny singa manaparitaka vy vy ambony dia chromium sy nikela . Ohatra iray fanta-daza amin'ity karazana fitaovana ity ny vy vy.
Sary 02: rojo vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Chromium dia manome ny vy miaraka amina oksida manify eo ambonin'ny vy. Antsoinay hoe sosona latent izy io satria io sosona io dia manemotra ny harafesin'ny metaly. Ankoatr'izay, ny mpanamboatra dia matetika manampy karbaona sy manganese betsaka mba hanomezana austenitika ny vy. Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia lafo noho ny vy firaka ambany.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny vy matevina ambany sy ny vy matevina?
Ny vy kely ambany sy avo dia samy nanatsara toetra noho ny vy karbaona. Na izany aza, ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy firaka ambany sy ny vy misy firaka ambony dia ny vy kely vita amin'ny firaka ambany dia ambany noho ny singa fangarony 0,2%, fa ny vy firaka avo kosa dia manana singa mampangotraka mihoatra ny 5%. Rehefa mandinika ny firafitry ny simika, ny vy ambany firaka dia misy vy, karbaona (latsaky ny 0,2%), ary ireo singa hafa toy ny Ni, Cr, Mo, V, B, W ary Cu, raha ny vy mahery kosa dia misy chromium vy, nikela, karbaona, manganese, sns.
Ny infographic etsy ambany dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny vy firaka ambany sy ny vy firaka avo.
Famintinana - Steel ambany firaka vs vy firaka avo
Ny vy kely ambany sy avo dia samy nanatsara toetra noho ny vy vy. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy firaka ambany sy ny vy firaka avo dia ny vy kely vita amin'ny firaka ambany dia ambany noho ny singa fangarony 0,2%, fa ny vy firaka avo lenta kosa dia mihoatra ny 5%.
1. "Steel matevina avo." Steel matevina avo - topy topimaso | Lohahevitra momba ny siansa mivantana , misy eto .
1. “789478” (CC0) via Pxhere
2. “4049725” (CC0) via Pixabay
Fahasamihafana eo amin'ny lasantsy sy ny kerosena ary ny diesel Fahasamihafana eo amin'ny Glidant Lubricant sy Anti Adherent Fahasamihafana eo amin'ny simia indostrialy sy ny teknika simika Fahasamihafana eo amin'ny jelly Vaseline sy ny solika Fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny masoandro Monocrystalline sy Polycrystalline
Fahasamihafana eo amin'ny rojom-pitantanana sy ny vanim-potoana fanaraha-maso
Fahasamihafana eo amin'ny piles sy hemôrôida
Fahasamihafana eo amin'ny Allograft Keratolimbal sy ny Autologous Graft
Fahasamihafana eo amin'ny polycarbonate sy ny plastika